မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ | Mya Kyun Thar isanewly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s. | Page 8
အာဃာတဆိုတာ ရန်ငြိုးကိုပြောတာပါ။ ဒေါသတို့ ရန်ငြိုးတို့ပေါ့။ ဒီလို ရန်ငြိုးဖြစ်ကြောင်း (၉)ပါး၊ သို့မဟုတ် (၁၀)ပါးရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေ လွယ်ကူစွာရေတွက်နိုင်ဖို့ မိမိရယ်၊ မိမိချစ်သူ ခင်သူရယ်၊ မိမိမုန်းသူ ရန်သူရယ် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးခွဲလိုက်ပြီး မိမိနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေါသဖြစ်ကြောင်းက သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသဖြစ်ကြောင်းတရားသုံးပါးက ၁။ ဒီလူဟာ မိမိကို အကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင် ရှေးကလည်း လုပ်ဖူးပြီ၊ ၂။ အခုလည်းလုပ်ဆဲ၊ ၃။ နောင်လည်းလုပ်လိမ့်မည်ဆိုပြီး စိတ်တိုနေတာ ဒေါသဖြစ်နေတာ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာ၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့နေတတ်တာပါပဲ။ မိမိချစ်သူ ခင်သူ မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါသဖြစ်ကြောင်းတရားသုံးပါးက ၁။ ဒီလူသည် မိမိချစ်သူ ခင်သူ မိတ်ဆွေအတွက် အကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင် ရှေးကလည်း လုပ်ဖူးပြီ၊ ၂။ အခုလည်း လုပ်ဆဲ၊ ၃။ နောင်လည်း လုပ်လိမ့်မည်ဆိုပြီး စ်တ်တိုနေတာ ဒေါသဖြစ်နေတာ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာ၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့နေတတ်တာပါပဲ။ မိမိမုန်းသူ ရန်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါသဖြစ်ကြောင်းတရားသုံးပါးက […]
မတ်လ (၁၂) ရက်နေ့မှ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့အထိ ကလေးသူငယ်များအတွက် ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တတိယတန်းမှ န၀မတန်းအထိ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။ သင်တန်းချိန်– နံနက် (၈)နာရီမှ (၁၀)နာရီအထိ။ သင်တန်းကာလ – (၁၂-၃-၂၀၁၂)ရက်နေ့မှ (၂၇-၃-၂၀၁၂) ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်း (၁၅) ရက်။ သင်တန်းနေရာ– မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ (တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ် ပြန့်ပွားရေးဌာန) ရတနာကျွန်းရိပ်သာ၊ သုနန္ဒာလမ်း၊ (ဋ) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ရန်ကုန် ဖုန်း– ၀၀၉၅-၁-၆၉၁၅၅၃ မှတ်ချက်။ ။ (၁) ကြိုတင်၍လည်း စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ကြိုတင်စာရင်း မပေးသွင်းနိုင်ပါက ဖွင့်လှစ်မည့်နေ သင်တန်းချိန်အမီ အရောက်လာပါ။ သင်တန်းသား ဦးရေ အကန့်အသတ်မရှိ လက်ခံပါသည်။ (၂) သင်တန်းကာလတွင် နေ့စဉ် မုန့်ကျွေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းအောင်သူများကိုလည်း ဆုအသီးသီးပေးအပ်မည်ဖြစ်သည့်အပြင် ပထမ၊ […]
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သည့် ကျောင်းဆောင် (မိုးကုတ်မြို့၊ ဖောင်တော်ဦးဘုရားပရိဝုဏ်အတွင်း) မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး တရားဟော တရားပြ သာသနာပြုတော်မူခဲ့သည့် ဓမ္မာရုံကြီး (မိုးကုတ်မြို့ ဖောင်တော်ဦးဘုရားအတွင်း မင်္ဂလာတိုက်) (၂၇-၁-၂၀၁၂) မိုးကုတ်မြို့သို့ သွားရောက် တရားဟောစဉ်က ရိုက်ကူးခဲ့သည့်ပုံများ
နိရောဓသမာပတ်ကို အနာဂါမ်နှင့် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သာလျှင် ၀င်စားနိုင်ပါတယ်။ ဒါတောင်မှ ဈာန်မရကြတဲ့ သုက္ခ၀ိပဿက အနာဂါမ် ရဟန္တာတွေ ၀င်စားလို့ မရကြပါဘူး။ ဈာန်ရ သမာပတ်ရှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ အနာဂါမ် ရဟန္တာတို့သာလျှင် ၀င်စားလို့ရတယ်ဆိုတာ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာမှာ ဖော်ပြထားလို့ မှတ်သားဖွယ်ရာ တင်ပြလိုက်တာပါ။ ကေ တံ သမာပဇ္ဇန္တိ, ကေ န သမာပဇ္ဇန္တီတိ သဗ္ဗေပိ ပုထုဇ္ဇနာ, သောတာပန္နာ, သကဒါဂါမိနော, သုက္ခဝိပဿကာ စ အနာဂါမိနော, အရဟန္တော န သမာပဇ္ဇန္တိ။ အဋ္ဌသမာပတ္တိလာဘိနော ပန အနာဂါမိနော, ခီဏာသဝါ စ သမာပဇ္ဇန္တိ။ (၀ိသုဒ္ဓိ၊ ၂။ ၃၄၄) မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ဈာန်မရတဲ့ အနာဂါမ် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေ မ၀င်စားနိုင်ပါ။ ဈာန်ရမှသာလျှင် ၀င်စားနိုင်ပါတယ်။ သမာပတ်ရှစ်ပါးနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အနာဂါမ် ရဟန္တာတို့သာလျှင် ၀င်စားနိုင်ပါတယ်။